Yuusuf Dabageed oo awaamiir culus dul dhigay hoteelada iyo maqaayadaha ku yaala magaalada B/weyne – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Yuusuf Dabageed oo awaamiir culus dul dhigay hoteelada iyo maqaayadaha ku yaala magaalada B/weyne
Maamulka gobolka Hiiraan ayaa soo saaray amar culus oo ku aadan in hoteelada iyo maqaayadaha ku yaalo magaalada B/weyne aanay lagu qaban karin shirar uusan ka warqabin maamulka gobolka.
Gudoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar (Yuusuf Dabageed) ayaa sheegay hoteelkii ama maqaayadii lagu qabto shir aanan maamulka ka warqabin in ciidamada ammaanka ay talaabo sharciga waafaqsan ka qaadi doonaan.
“Hoteelkii ama maqaayadii lagu qabto shir aanay maamulka gobolka ka warqabin waxaa laga qaadi doonnaa talaabo sharciga waafaqsan, waxaan uga digayaa milkiilayaasha goobahaasi inaysan ogolaanin in shirar lagu qabto” Sidaas waxaa yiri gudoomiyaha gobolka Hiiraan Yuusuf Dabageed.
Warqad qoraal ah oo maalintii shalay kasoo baxday xafiiska gudoomiyaha gobolka Hiiraan Yuusuf Dabageed ayaa amarkaan lagu sheegay, iyadoona taliska ammaanka gobolkaasi la faray fulinta amarka kasoo baxay gudoomiyaha gobolka.
Dhinaca kale, Odayaasha dhaqanka gobolka Hiiraan ayaa dhawaantaan waxay iclaamiyeen inay dib u bilaabayaan shirka dib u heshiisiinta beelaha wada-dega gobolka Hiiraan, taas oo u muuqata mid khilaaf iyo muran keeni karta, inkastoo ilaa iyo haatan odayaashaasi wax jawaab ah ka bixin amarka gudoomiyaha gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar (Yuusuf Dabageed).